पात्र र भूमिका | मझेरी डट कम
पात्र र भूमिका
kbs — Sun, 04/03/2011 - 13:51
कथा सुरु भएकै थिएन । कथाको एउटा अनिर्धारित पात्र आएर आफ्नो भूमिकाका बारेमा मसँग सोध्न लाग्यो । म असमञ्जस्यमा परेँ । पात्रकै रूपमा निर्धारण गरिनसकेको पात्रले आफ्नो भूमिकाका बारेमा सोध्न आउनु कहाँसम्मको चाकडी ! मैले उसको भूमिकाको बारेमा नबताएपछि ऊ एकछिन अचम्म मान्दै यताउति घुमिरहृयो । सायद उसलाई लागेको थियो होला कि मैले उसलाई उसको भूमिकाका बारेमा सोचेर बताउँदै छु । करिब एक घण्टा कुरिसकेपछि मेरा कथाको अनिर्धारित पात्रले सहिरहन सकेनछ बिचरा ! कसरी सहिरहोस् त ? उसले जे सोधेको थियो त्यसमा मैले न त 'राम्रो भूमिका दिएको छु' भनेर जवाफ दिएँ न त 'नराम्रो भूमिका दिएको छु' भनेर जवाफ दिएँ । अलि झर्को लागेको जस्तो देखिए पनि ऊ मेरो नजिकै आयो र मिठो स्वरमा अनुरोध गर्‍यो, "कृपया कथाकारज्यू ! तपाईंको कथामा मेरो भूमिका कस्तो राखिदिनु भएको छ भनी दिनुस् न । राम्रै छ होला नि ! अलि सशक्त राखिदिनुस् है !"
म अझै घोरिइरहेको थिएँ । मेरो कथाको त्यही अनिर्धारित पात्रले बोलीले मात्र हुने नदेखेर होला सायद आफ्ना हातहरू सक्रिय गराउन थाल्यो । शरीरका विभिन्न अङ्गहरू सुम्सुम्याउँदै मलाई फकाउन थाल्यो । उसका हातको स्पर्श एकदमै नरम, मायालु र आग्रहले युक्त थियो । नरम हातका सुम्सुम्याइले म उसको भूमिकाका बारेमा भन्ने वा नभन्ने निर्णयमा पुग्न भुलिरहेको रहेछु । लामो समयसम्म स्पर्श गरिरहँदा पनि मेरो जवाफ नआएकोमा उसको धैर्यमा आगो लाग्नु स्वाभाविकै थियो । विस्तारै उसका हातको नरमपन घट्दै गइरहेको मैले अनुभव गरेँ ।
उसले मलाई पुनः सम्बोधन गर्दै भन्यो, "कथाकारज्यू ! हैन, तपाईंको कथामा मेरो भूमिका कस्तो छ भनिदिनुस् न । राम्रै भूमिका दिनु भएको छ होला नि हैन त ! अत्यन्त सशक्त, प्रभावकारी, सकारात्मक र आदर्शवादी है ! यस्तो भूमिका राखिदिनु भयो भने म तपाईंलाई तपाईंको लेखकीय परिश्रम र महान्ताको कदर स्वरूप दक्षिणा टक्र्याउँछु नि !"
यति भन्दै उसले झण्डै हावाबाट टिपेझैँ गरी एउटा नोटको बिटो मतिर तेर्सायो । मलाई पर्‍यो समस्या । यो घूस लिने र दिने चलन लेखक र पात्रका बीचमा पनि चलिसकेको रहेछ भन्ने मैले आजै थाहा पाएँ । मैले कथा लेख्न पनि सुरु गरेको थिइन । हल्काफुल्का घटना र पात्रको मानसिक खाका मात्र तयार गर्न थालेको थिएँ । घटनाहरू पनि पूर्ण थिएनन् । कति पात्र राख्ने, कस्ता पात्र राख्ने, को को पात्र राख्ने र तिनीहरूको चरित्र तथा भूमिका कस्तो दिने भन्ने कुराको पनि निर्णय गरिसकेको थिइन । मलाई घटनाक्रमको त्यति धेरै सम्झना पनि थिएन । त्यसका पात्र त झन् सपनामा देखेका मान्छेजस्ता लाग्थे । कुनचाहिँ पात्र प्रमुख थियो, कुनचाहिँ पात्र शक्तिशाली थियो, कुनचाहिँ पात्र अनुकूल र कुनचाहिँ पात्र प्रतिकूल थियो भन्ने कुराको पनि कुनै स्मरण थिएन । त्यसैले म कथा लेख्ने विचारले मेरो स्मृतिपटलमा घटना र पात्रहरूलाई बोलाउने प्रयत्नमा थिएँ ।
घटना घट्दा साल जन्मेर बामे सर्दै थियो । यहाँ समयको आँचल समातेर प्रत्येक बाह्र महिनापछि नयाँ साल जन्मिन्छ । जन्मिएर हरिलो भरिलो हुन नपाउँदै साल विस्थापित हुन्छ अथवा मर्छ र मात्र इतिहास बनेर भित्तेपात्रोका पानाहरूमा अङ्कित हुन्छ । त्यसैले नयाँ हुनु भनेको अनिश्चित हुनु पनि हो । मेरो कथाको घटना पनि त्यस्तै छ । एकपटक नयाँ नै थियो । घटना ताजा थियो । ताततातै कथाका रूपमा परिणत गरेर पाठकसमक्ष पठाएको भए त्यसले ठूलो वाहवाही पाउने पनि थियो र त्यसको तयारी पनि मैले राम्रै तरिकाले गरेको थिएँ तर समस्या यस्तै भएको थियो । कथाका पात्रहरू तँछाड मँछाड गर्दै भूमिका माग्न तम्सिए । त्यति मात्रै होइन ठूलै द्वन्द्व भयो पात्रहरूका बीचमा । धेरै पुरुषहरूमध्ये एक्ली नारी पात्र भएको चाहिँ याद छ मलाई । सबै पुरुष पात्रहरू उक्त नारी पात्रको एकलौटी वा सामूहिक नायकका रूपमा उभिन चाहन्थे भन्ने कुराको भेद भने मैले जान्न बाँकी थियो । जुन पात्र मैले असल, अनुकूल र भव्य ठानेँ त्यही पात्र खराब, प्रतिकूल र निक्रिस्ट भएर देखिएपछि मैले पात्र चयन गर्न सकिन । पात्र चयनमा असफल भएपछि म कथाकार होइन भन्ने दसी जुटाएँ मनमनै । त्यसपछि महिनौँसम्म उक्त घटना मेरो मानस पटलबाट विस्मृत प्रायः भएर गयो ।
एक्कासि एक दिन मेरो मरेको मस्तिष्क चलमलाउन थाल्यो । अनि मैले सोचेँ मेरो कथाकार मरेको रहेनछ । ऊर्जा पाएको भए मेरो कथाकार कुम्भकर्णे निद्रामा पर्ने रहेनछ । त्यस दिन किनकिन मेरो कथाकार कुम्भकर्णे निद्राबाट आँखा उघार्दै मलाई क्वारक्वार्ती हेर्न थाल्यो । आँखाभरि आँसु बनाएर भन्न थाल्यो, 'साथी ! म मर्न सकिन । त्यस घटनाका बारेमा कथा नलेखी मलाई स्वर्गलोकमा ठाउँ मिलेन । त्यसैले अब म जागिरहेको छु । म गम्भीर भइरहेको छु कथा लेख्नलाई ।'
यति भनिसकेपछि म/ऊ अर्थात् कथाकार उक्त घटना र त्यस घटनाका पात्रहरूलाई कथाको कुन साँचोभित्र हालेर लेख्ने भनेर सोचमग्न हुँदाहुँदै अगाडि घूस दिने पात्र जुर्लुङ्ङ देखा परेको थियो । पाठक महोदय ! उक्त अनिर्धारित पात्रले आफूलाई नायक बनाउन मसँग गरेका सबै किसिमका कर्तुत र प्रयासहरू म तपाईंसमक्ष बताउँदै छु धैर्य गर्नुहोस् । हतारिएर भने सुनेको कुनै फाइदा छैन ।
अँ त, चाप्लुसीले मेरो दाल गल्ने नदेखेर उसले आफ्नो स्वभावमा परिवर्तन ल्याउन थाल्यो । नरमबाट कडातर्फ, आग्रहबाट धम्कीतर्फ ऊ आफूलाई परिवर्तन गर्दै गइरहेको थियो । एउटा राजनीतिज्ञले आफूसँग भएका सबै शस्त्रअस्त्रहरूको प्रयोग गरेर जनतासँग भोट मागेझैँ उसले पनि अब उसँग बचेखुचेका शस्त्रअस्त्रहरू प्रयोग गर्न खोजिरहेझैँ लाग्थ्यो ।
"ए कथाकार ! तेरो कथामा मेरो भूमिका के हो, किन भन्दैनस् ? तँलाईं आफ्नो ज्यानको माया भए भन् अथवा मलाई तेरो कथामा एकदम असल, सकारात्मक, सशक्त, परोपकारी र आदर्शवादी भूमिका दे । होइन भने ... ... ... !" एक्कासि ऊ धम्की, रिस जोस र आक्रोसका साथ चर्कियो ।
बाफरे बाफ, पाठक महोदय ! मेरै कथाको अनिर्धारित मानस पात्रले मैलाई धम्क्याउँदै हातमा पिस्तोल समातेर मलाई नै ताक्न थाल्यो । म एकचोटि बेसरी डराएँ । सायद तपाईं भएको भए पनि डराउनु हुन्थ्यो होला
हगि ! कस्तो अनिश्चित छ जीवन ! को आफ्नो, को अर्काको भन्ने कुराको कुनै भेद रहेन अब । कसले गर्न सक्ने, कसले गर्न नसक्ने त्यसको पनि कुनै अर्थ रहेन अब । जीवन बाँच्नु र मर्नुको दोसाँधमा घडीको पेन्डुलमझैँ हल्लिरहेको देख्दा लाग्छ जीवन अनिश्चय र अस्वाभाविकताको मुहानबाट बगिरहेको छ । यसको टुङ्गो पनि छैन र बगाइको अर्थ पनि त छैन । नबगिकन एक ठाउँमा स्थिर भएर बस्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । जीवन निरर्थकहरूको पुञ्जबाट बनेको वाफ हो । कहिले बर्सिन्छ साउनमा, कहिले जम्छ माघमा र कहिले उड्छ चैतमा । जसले जसरी अर्थ्याए पनि अर्थिने तर अर्थहरूका भ्रान्तिले स्वयम् अर्थलाई अनर्थ भोग्न विवश बनाइदिने । केही गर्न खोज्नु पनि जीवन, केही गर्न नदिनु पनि जीवन । अर्थहरूको टुङ्गोमा पुग्न खोज्दा बुङ्गो बनेको जीवन । यस्तो जीवनसँग तपाईं भएको भए पनि पक्का डराउनु हुन्थ्यो, बुझ्नु भयो । हुन सक्छ, तपाईं मलाई 'यो कथाकार त निकै कायर पो रहेछ' भनि रहनुभएको होला । ठीकै हो । म कायर नै छु । वीरहरू त लड्न जान्छन् सिमानामा । बैरीहरूले सीमा मिच्दा कथा लेखेर बस्ने फुर्सद कहाँ छ
उनीहरूलाई ? वर्गशत्रुहरूले शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार गरे र देश खोक्रो बनाए भनेर कथा लेख्ने फुर्सद कहाँ र उनीहरूलाई ? म लड्न सक्दिन, त्यसैले कथा लेखेर आफ्नो कायरताको परिचय दिइरहेको छु । यदि त्यस्तो ठान्नुहुन्न भने केही छैन म कायर होइन भन्ने कुराको प्रमाण पनि म तपाईंलाई दिन सक्छु ।
हो त, मैले अघिको घटना त भन्नै भुलेको रहेछु । उसले अर्थात् मेरो कथाको अनिर्धारित पात्रले आफ्ना दुवै हात दह्रो बनाएर समातेको कालो पिस्तोल ताकेपछि मैले बाँच्ने उपाय निकाल्न खोजेँ । तपाईं भएको भए पनि यसै गर्नु हुन्थ्यो होला हगि ?
"ओ पात्रजी ! तपाईंको पिस्तोल हेर्नुस् एकपटक । मलाई त त्यसमा गोली नै छैन जस्तो लाग्यो । पक्का हो, म तपाईंको भलाइकै लागि भन्दै छु । यहाँ मान्छेहरू बाँच्ने गोली खान नपाएर भकाभक मरिरहेका छन् । यस्तो बेलामा तपाईंको मर्ने गोलीको के महत्त्व छ र ? पक्कै पनि तपाईंको पिस्तोलमा गोली छैन ।"
मेरो कुराले उसलाई केही प्रभाव पारेछ क्यारे । ऊ अलि सतर्क भयो । यद्यपि उसले मलाई ताकेरै ट्रिगर दबायो 'खच्याक् खच्याक्' । साँच्चै हो रहेछ । गोली निस्किएन, यसको मतलब पिस्तोल पड्किएन । ऊ नतमष्तक भयो । म हाँस्न थालेँ । मेरो कथाको अनिर्धारित पात्रले लाज र ग्लानिले आफ्नो अनुहार रातो बनाएको मैले देखेँ । मैले उसलाई धेरै नै गिल्लाएँ । साह्रै भएपछि उसले राताराता आँखा बनाउँदै भन्यो, "पख्, म गोली लिएर आउँछु । अनि कसरी नभन्दो रहेछस् मेरो भूमिका ! गोली भरिएको पिस्तोलले 'घच्याँ घच्याँ' छका छचोटि हानेपछि अनि मलाई जिस्काउलास् !"
यति भनेर ऊ सरासर हिँड्दै गयो । एक छिनपछि दौड्दै गयो । अझ एक छिनपछि उड्दै गयो र अलप भयो ।
बल्ल मलाई तत्त्वबोध भयो । रहस्यको संसारबाट अब म पूरै होसहवासमा आएँ । मलाई घटना याद भयो । पाठक महोदय ! यस कथाकी नायिका एकजना आइमाई मान्छे हुन् । हुन त कथाका नायिका सबै आइमाई मान्छे नै हुन्छन् । उनी अहिले बेहोस छिन् । लगभग पैँसठ्ठी वर्षकी मेरो कथाकी नायिका नायकविहीन छन् । नायक नभएकी एक्ली नायिका घरमा एक्लै बसेको देखेका तेह्रजना खलनायकहरू (जसको अनुहार मैले चिन्दछु, तर अहिले सम्झिसकेको छैन ।) पनि थिए उक्त घटनामा । एउटा निम्नवर्गीय जीवनस्तर सुहाउँदो घरभित्र पसेर ती तेह्र जना खलनायकहरू मध्ये दुई जनाले मेरो कथाकी नायिकाको हाततिर र दुई जनाले खुट्टातिर समातेर ताने र पालैपालो ... ... ... । बस्, घटना यत्ति हो । कथाको सामग्री पनि यत्ति हो ।
पाठक महोदय ! तपाईंलाई लाग्न सक्छ 'यति जाबो घटनाले पनि कथा बन्छ र ?' म तपाईंसँग सहमत छु कि यति घटनाले त कथा बन्दै बन्दैन । भन्नका लागि थप अर्को कुरा पनि छ मसँग, जतिसुकै घटनाले पनि कथा बन्दैन । घटना एक्लैले कथा बनाउने भए यो संसारका सम्पूर्ण घटनाहरू कथा बनेर आफैँ कथासङ्ग्रहमा बस्थे । त्यस्तो भएको देखिँदैन । कथाका लागि त पात्र पनि चाहिन्छ नि होइन त ! हो त, मेरो कथाको लागि पात्र त चयन भएकै छैन । अब मलाई एकैछिन कथाका पात्रको चयन र भूमिकाका लागि सोच्न दिनुस् । मलाई एक जना पात्रको अनुहार याद आयो । कताकता देखेजस्तै पात्र छ । मैले सम्झिने प्रयत्न गरेँ । ओहो, पाठक महोदय ! त्यस घटनाका खलनायकहरूमध्ये एउटा अनुहार अघि मसँग आफ्नो असल, अनुकूल, भव्य र आदर्श भूमिका माग्ने त्यही अनिर्धारित पात्र हो । हो हो ! अब उसको भूमिका स्पष्ट भइसकेको छ । अब ऊ मेरै कथाको खलपात्र हो । अब मैले कथामा उसको भूमिकाका बारेमा तपाईंहरूलाई बताइरहनु पर्दैन होला ।
पाठक महोदय ! यहाँ धेरै पात्रका भूमिका रहस्यमयी बनेका छन्, विस्मृत बनेका छन् । चनाखो भएर कथा पढ्नु होला । मेरो कथाकी नायिका होसमा आएपछि म तुरुन्त तपाईंहरूलाई खबर गर्नेछु । कथाका अन्य बाह्र जना खलपात्रको भूमिका थाहा पाएमा पाठक भएका नाताले तुरुन्त मसँग सम्पर्क राख्नु होला । यदि यसो भएमा मेरो कथा पूर्ण हुने छ ।
म पनि कौण्डिन्य गोत्री भट्ट
छुट्टी हाे सही तर छुट्टि
प्रर्देशबाट अामालाई चिट्ठी
विलासी विश्व (बाल–एकाङ्की)
मझेरी भलाकुसारी, अंक ०७ (शरण आँसु)
उस्ले आफ्नो काम दोहोर्यायो
युद्धले भुलेको बाँकी युद्ध’ लड्ने साहसी कवि सुजन सेलिङ्
तिम्रै माया लाग्छ काली,
तीन मुक्तक (जोखिदिन्थे, मन छुने, जलाई दिनु)
यो ! भितामा नयाँ पात्रो लगाएर गयो
जनजागरणको महाकालीदेखि मेचीसम्मको यात्रा राजविराज
अन्तराष्ट्रिय अदातलमा साक्षीको बयान
यहाँ जिन्दगीले कहाँ बास पायो
जीवन अनि जगत बुझेर
सम्झनाले सतायो कि